Iimephu ezingama-25,000 ezivela kwihlabathi liphela ziyafumaneka ukuze zikhutshelwe- iGeofumadas
NgoJulayi, 2015 Iiphotography, Ukufundisa i-CAD / GIS, Internet kunye neBlogs
Ingqokelela yeMephu yeThala leeNcwadi iPerry-Castañeda yindibaniselwano enomtsalane equlathe iimephu ezingaphezu kwama-250,000 eziye zaskrwa zenziwa zafumaneka kwi-Intanethi. Uninzi lweemephu zikwindawo yoluntu kwaye zimalunga nama-25,000 ezikhoyo ngoku
Njengomzekelo, sibonisa ezinye zeemephu ezikhoyo kwiqoqo.
Eli licwecwe leCartographic 1: 50,000 yeGirona, ukusuka kuhlelo lokuqala lowe-1943, xa oku kwenziwa ngumkhosi wase-United States ngezizathu zokhuseleko :). Iimephu zolu hlobo zifumaneka phantse kuwo onke amazwe, ziyafumaneka ukuze zikhutshelwe.
Jonga lo mzekelo wetshathi yokuKhangela 1: 1,000.000 ngaphezulu kweLima, ePeru. Zonke iimephu ezikule ngqokelela ziyafumaneka ngenqanaba eliphezulu leenkcukacha njengoko kubonisiwe kulo mfanekiso ulandelayo.
Kwakhona kunomdla kwiimephu zeemfazwe; umzekelo ubonisa indlela yokuxhatshazwa kwe-29 ukususela ngoSeptemba ukuya kwi-14 ka-Oktobha eVerdun, ngexesha leMfazwe Yehlabathi yokuqala kwi-1918.
Le yi-England ne-Wales phakathi kwe-1649 kunye ne-1910. Ukuqokelelwa kweemephu zembali kubanzi kakhulu, ukusuka kumazwekazi ahlukeneyo.
Indlela ehleliweyo imephu ithatha inzame kuba akukho ikhathalota yemethadatha, kodwa ngokubanzi kunokwenzeka xa ungena kwindawo yomdla, e yalelwe ngale ndlela:
Imephu Amerika kuquka eunited States, Khanada kwaye Mekhsikho
Imephu Australia kunye nePacific
Imephu KuMbindi Mpuma
Imephu Iiplasi neePolisi
Imephu IRashiya kunye neRiphabhlikhi yaseSoviet
Imephu Iunited States kuquka IiPaki zeSizwe neeMkhumbuzo
Imephu Counties Texas
Ndincoma ukugcina idilesi yekhasi leThala leencwadi, njengokuba lunomthombo othakazelisayo wolwazi, olukhangela kancane kwaye lulayishwe ngokusetyenziswa kwamahhala.
ILibrari yasePerry-Castañeda itholakala kwiCampus yaseYunivesithi yaseTexas, okwangoku yesihlanu iLibrari ephakamileyo kwinqanaba lezemfundo; yeshumi elinanye kumgangatho we-United States yonke.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Imibutho yokuDibanisa-Umxholo weGeomatics we-International Informatics Fair 2016
Post Next Isatifikethi seCadastral Certificate esisuka kwi-CAD / GISOkulandelayo »
Impendulo enye "kwiimephu ezingama-25,000 ezivela kwihlabathi liphela ziyafumaneka ukuze zikhutshelwe"
UNuriz Márquez Moreira uthi:
Izinto ezintle kakhulu, sibonga ngokubelana.